रमेश खरेल अब राजनीतिमा ! नेताको गुलामी गर्नेले रविलाई अनुसन्धानबिनै प’क्राउ गरे – ताजा समाचार
रमेश खरेल अब राजनीतिमा ! नेताको गुलामी गर्नेले रविलाई अनुसन्धानबिनै प’क्राउ गरे
काठमाडौं। पूर्व डिआईजी रमेश खरेलले आफु अब राजनीतिमा आउने संकेत गरेका छन् । अहिले राजनीतिमा बिचलन आएको बताउँदै उनले आफु सुधारका लागि राजनीतिमा आउने बताएका छन् । उनले अहिलेका राजनीतक दलका नेतालाई हेर्दा मोटाएर सबै किम जोगं जस्तो भएके टिप्पणी गरेका छन् । उनले राजनीतिक नियुक्ति र प्रभावका कारण आफु आइजिपी हुन नसकेको बताएका छन् । उनले ठूले राई आइजिपी भएको भए आफुले सेवालाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
उनले नेपाल प्रहरी पनि राजनीतक दलको कार्यकर्ता हुन थालेको हो की भन्ने आशंका उब्जाएको बताए । उनले सो घटनामा भएका एभिडेन्सहरुलाई संकलन गरेर उनको संलग्नता भए नभएको निक्र्यौल गरेर मात्र रविलाई पक्राउ गर्न सकिने बताए । त्यसो नभई पक्राउ गर्न हतारिएका कारण प्रहरी आलोचित हुन थालेको बताए । उनले प्रहरी पनि अहिले राजनीतिक दलको नेताको निर्देशन मात्र मान्ने हो की भन्ने देखिएको बताए । निजामति कर्मचारीका सहसचिवलाई छानविन समितिमा राखेर प्रहरी अनुसन्धान विश्वासिलो हुन नसक्ने बताए । नेपालमा अहिले ब्यवसायीक ब्यक्तिलाई साइड लगाएर असम्बन्धित ब्यक्तिलाई घटनामा सहभागी गराइएका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।